प्रिय अनु, खुशी लाग्यो– हामीले अपेक्षा गरेको मार्गतर्फ नै तिम्रा सांगीतिक पाइलाहरु अघि बढेको देख्दा । वर्ष दिनअघि जनगायक जीवन शर्माको युट्युब च्यानलबाट तिम्रो सुमधुर स्वरमा ‘सागर भेट्न जाँदैछ नदी’ गीत सुनेपछि तिमीलाई नै सम्बोधन गरेर केही पंक्ति कोरेको थिएँ । अहिले तिम्रो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको...
कमरेडहरु ! आजको सचिवालय बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ । म सबै कमरेडहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । बैठक धेरै जटिल मोडमा छ, पार्टी निकै जटिल मोडमा छ । सामान्य अवस्थाबाट पार्टी पनि गुज्रिराखेको छैन, हामी पनि गुज्रिराखेका छैनौं । म एक दुईवटा कुरा राखौं । अस्तिको बैठकमा केही...
२०३० को दशकमै प्राडा केशरजंग बरालले मगर जातिका मौलिक लोक संस्कृति र संस्कारहरु सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुभएको थियो । उहाँले मगर जातिका सयौँ मौलिक संस्कृति र संस्कार अध्ययन गर्ने क्रममा मगर जातिका आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यताहरु रहेको निष्कर्ष निकाल्नु भयो । ती मान्यताहरु वस्तुगत, सरल र प्राकृतिक विज्ञानमा आधारि...
दाङरा खाने भाङरा लाउने म आज बहुल समाजको जिम्मेबार सदस्य हूँ । म र मेरो समुदायले गर्ने कर्मले बृहत्तर नेपाली समाजको पर्यावरणमा केही न केही प्रभाव पार्छ । त्यसैले मेरो समुदायमा हजारौँ वर्षदेखि चलिआएका कतिपय व्यवहारहरु म खुलेर बताउँदैन । त्यसका पछाडी धेरै कारण छन् । कतिपय ती व्यवहारहरु उजागर गर्दा राज्यबाट दण्डित हुनु ...
उर्लेर आउँदा गण्डकीको भेलले यी ढुङ्गे बगर कहाँ लाने हो ? माथिका दुई हरफहरु चर्चित जनवादी गायक जीवन शर्माका हुन् । फरक प्रसङ्गमा गीतिनाटक ‘ठूली’का लागि जीवन शर्माले लेखेको यो गीत यतिबेला नेपाली पत्रकारिता जगतका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिएको छ । प्रविधिको उच्चतम विकास, न्यू मिडियाको आगमन, अनलाइन र तालिम तथा...
विकास खाली कुनै क्षेत्रको भौतिक परिवर्तनसङ्ग सम्बन्धित छैन । विकास कुनै पनि क्षेत्र वा पक्षको भौतिकसङ्गै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानवीय चेतनाका सम्पूर्ण अवयवहरुको विकासलाई बुझ्नुपर्दछ । हामीले भौतिक विकासलाई मात्र विकास बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । कुनै पनि पक्षको स्थितिमा भएको सकारात्मक परिवर्तन वा रु...
जिन्दगीका हरेक आरोह–अवरोहमा दृश्यहरू देखिन्छन्, भेटिन्छन् तर सबैलाई कैद गर्न सकिँदैन । कैद गर्न सकिएकाहरूले हाम्रो मस्तिष्क र जीवनलाई सदैव उर्जाशील बनाउन मद्दत पु¥याउँदो रहेछ । यात्राको क्रममा कति ठाउँमा पुग्दा यस्तो लाग्छ कि कतै यो स्वर्गको टुक्रा नै पो हो कि ? कति कुरालाई आँखाले देखिँदैन जसलाई मनले हेर्नुपर्ने हुन्छ ...
नेपालको समग्र स्थिति र घटनाक्रममाथि विचार गर्दा नेपाल कता जाँदैछ, यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ र हामीले त्यसबारे विचार गर्नु आवश्यक भएको छ । गतकालमा हाम्रो देशमा कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरू भएका छन् । जस्तो कि संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण, संविधान अनुसार विभिन...
विगत केही वर्षदेखि सीके राउतले आफ्ना आतंककारी गतिविधिद्वारा देशद्रोहको मुद्दा उठाइरहेका छन् । उनी एक राष्ट्रघाती व्यक्ति भएको कुरामा दुईमत छैन । उनले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु, पर्चाहरु, अडियो र भिडियोहरुले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दछन् । उनले गरिरहेको कार्य मूलरुपमा भारतको योजनामा भइरहेको छ । यसरी उनी भारतीय दलाल हुन् । सी...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले ‘म रोएको त्यो दिन र टीकापुर काण्डका शिक्षा’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेकी छन् । आखिर किन रोइन् उनी ? उनकै शव्दमा– २०७२ साल भदौ ७ गतेको त्यो कालो दिन मेरो मानसपटलमा अहिले पनि नाचिरहेछ । त्यो दिन कैलालीको टीकापुरमा दुर्दान्त घटना भयो । राजनीतिको आवरणमा अपरा...